Akanjo - Noti Caballos | Soavaly Noti
Ao anatin'ny fifehezana olimpika izany dia mahaforona soavaly hita ao amin'ny fitafiana. Ao aminy no tsy maintsy amarihantsika fa ny soavaly dia mivoatra amin'ny alàlan'ny fampihetseham-po mandanjalanja sy mahay mandanjalanja. izay ahazoan'ilay mpitaingina ilay biby raiso am-pilaminana ny baikonao, amin'ny fomba mifandanja ary mirindra.
Ny tanjona dia ny hahatratrarana izany tony ny soavaly, mailaka ary malefaka. Ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny tontolon'ny akanjo dia hita eto amin'ity habakabaka ity. Torohevitra, toetra mampiavaka ny soavaly izay ampiasaina amin'ity fifehezana ity na fitsipika sy fifaninanana izay Izy ireo dia ankalazaina toy ny akanjo. Ho fanampin'ny torohevitra hikarakarana biby, fitaovana ary lava sns. Izay rehetra misy ifandraisany amin'izany Fifehezana Olaimpika ho hitanao amin'ity habaka ity.
Ny firindran'ny mpitaingina sy ny soavaliny amin'ny alàlan'ny hetsika sarotra aorian'ny fandaharana napetraka antsoina hoe reprise no ...
Fehin-tànana kely tsy misy embouchure (I): Akanjo?
Raha ny mitaingina ny soavalintsika dia afaka misafidy isika amin'ny fampiasana lamboridy amin'ny embouchure (fillet na manaikitra) na ...